Track 9: reraka — Trip LEE - OFISIALY SITE
Isika no fahazoana azy io mahazo azy io
Tsy lasa miadana kokoa isika gon’ Win
Tsy lasa miadana kokoa isika gon 'mandresy
Tsy lasa miadana kokoa fantatsika
Okay ekena ekena I mahazo azy
Inona no hevitra ny filalaovana ny lalao raha tsy handresy izany
I tsy tsy nandrora hanitra enina ambin'ny folo
Miantso fa ny fanomezam-pahasoavana mba fantatrao no gotta entiny
Y'all miaina toy ny minitra dia tsy manam-petra
Raha ny fotoana dia tsy ny vola avy eo hoe nahoana ianao zavatra mahasolafaka ny handany azy
Farany, nahita tovovavy izay tsy ao an-telefaonina ny fotoana rehetra mba fantatrao tsy maintsy ampanenoy izany
Oh ry Andriamanitra ô
Izany no tsy mahazatra tsy misy tovovavy izany manaitra
Aho miezaka hiady ho amin'ny antony
Y'all te-ady amin'ny fanehoan-kevitra
Tsy mahazo izany dawg, tahaka ny maty gadona ray tsy mandray anjara
Dia hoy ireo na oviana na oviana ho aho na inona na inona, fa mihevitra aho fa mbola Hay awesome
Aho dia tsy ho niteny fotsiny aho hahazo izany atao
Izy ireo te-hahazo asa na te-hahazo basy?
Te hahazo Raha mivantambantam-piteny sy hatao fanatitra toy ahy amin'ny masoandro
Wow, Mieritreritra aho fa izy ireo amin'ny ho antsika
Aza matory mow izany mahita tory
Y'all manahy azy bout rehefa Jordana indray mitete
Fa ianareo kosa dia tsy manahy bout izay ny vatanao no?
Christian • Desambra 30, 2014 amin'ny 2:23 PM • navalin'i
Azonao hazavaina ny hafatra ao ambadiky ny hira azafady?
xxx • Febroary 9, 2017 amin'ny 4:51 PM • navalin'i
ա hoah ity bilaogy ity іs mahafinaritra tiako St ս maty ny poѕts.
Mijanòna ny asa tsara! Fantatrao, peгsons maro no mitady аround ho an'ity vaovao, Bika ᥙ afaka hanampy azy ireo ց г ᥱ atly.
fuck • Jolay 6, 2017 amin'ny 6:57 aho • navalin'i
Pretty lehibe lahatsoratra. I fotsiny tafintohina eo amin'ny bilaogy, ary te-hilaza izay efa Tena nahafinaritra nilalao onja manodidina blôginao.
Na izany na tsy ho subscribing aho amin'ny RSS
sakafo ary manantena aho manoratra indray ianao tsy ho ela!